မတော်ရသေးတဲ့ ခယ်မလေးကို လက်ထက်ခါနီးမှ အစမ်းသပ်ခံရတဲ့ သတို့သားလောင်းရဲ့အဖြစ်
မတော်ရသေးတဲ့ ခယ်မလေးကို လက်ထက်ခါနီးမှ အစမ်းသပ်ခံရတဲ့ သတို့သားလောင်းရဲ့အဖြစ် လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။ သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး…။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်…။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့…။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် …
လူပေါင်းမှားတာ..အဇာတသတ်မင်း လူပေါင်းမှားတာ..အဇာတသတ်မင်း အလှူအတန်း ရက်ရောတာ.. အာသောကမင်း လူသားစားတာ.. ပေါရိသာရမင်း ချစ်သူကို အပျိုစစ် မစစ် သိချင်လို့ မီးပုံထဲ ခုန်ဆင်းခိုင်းတာ.. ရာမမင်း သီတာဒေဝီကိုတကယ်ချစ်တာ. . ဒဿမင်း လူ့ပြည်တင်မဟုတ်ပဲ နတ်ပြည်ငရဲပြည်အထိ ဗိုလ်သွားကျတာစွန်းဝုခုန်းလို့ခေါ်တဲ့…. မျောက်မင်း ဥမ္မာဒန္နီကိုမြင်ပီး ဂေါက်သွားတာ.. သိဝိမင်း ပထွေးကို ဝမ်းဘိုင်ဝမ်း ဆွဲပြီး ဘုရင်တက်လုပ်တာ.. အနော်ရထာမင်း သွားလေရာ စော်ကြည်တာ.. ကျန်စစ်မင်း ဒူလွန်း အ,လွန်း န,လွန်းတာ.. စောလူးမင်း လက်ညိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်တာ.. အလောင်းစည်သူမင်း နဂါးမ က မွေးပြီး တန်ခိုးကြီးတာ ..ပျူစောထီးမင်း ပြုံးလိုက်တိုင်း ရတနာမိုးတွေ ရွာချတာ..ပြုံးမင်း မိန်းမ မာယာကြောင့် မှဲ့ရှင်ပျောက်ပြီး …
“သူ႔ဘက္ကေန သင့္ကို ျဖတ္ခ်င္ေနၿပီဆိုတာကို သြယ္ဝိုက္ေျပာေနတဲ့ စကား (၇)မ်ိဳး”
ကိုယ့္ခ်စ္သူကို အရမ္းခ်စ္ေပမယ့္ စိတ္ကုန္သြားတဲ့ေန႕ဆိုတာေရာက္လာရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူဟာ တျခားတစ္ေယာက္လို၊ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လို ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးပါ။ တခါတေလ ကိုယ့္ေဘးမွာရွိေနတဲ့သူဟာ အရင္က ကိုယ္အရမ္းခ်စ္ခဲ့တဲ့သူမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႕ ေတြးရေလာက္ေအာင္ သူကလည္းေျပာင္းလဲလာတာမ်ိဳး၊ ေႏြးေထြးခဲ့သမွ် ဆက္ဆံေရးက ေအးစက္လာျပီး ကိုယ့္ကိုေရွာင္ဖယ္လာတာမ်ိဳး၊ စိတ္ပ်က္စရာ စကားေတြေျပာတာမ်ိဳး စတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္္။ တကယ္လို႕ သင့္ခ်စ္သူက သင့္ကို ဒီစကားေတြေျပာေနရင္ သူသင့္ကို စိတ္ကုန္ေနျပီဆိုတာကို သြယ္ဝိုက္ေျပာေနတာပါေနာ္.. (၁) ငါ့ကိုလြတ္လပ္ခြင့္ေလးနည္းနည္းေပးပါဦး လူတိုင္းက တစ္ေယာက္တည္းေနဖို႕ အခ်ိန္တစ္ခုလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ခ်စ္သူက ဒီစကားကို မၾကာခဏေျပာေနတယ္၊ သူ႕ကို တစ္ခုခုေျပာတိုင္း ဒီစကားကိုပဲ ေျပာေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူက သင္နဲ႕စကားမေျပာခ်င္ေတာ့တာ၊ သင့္ကိုေရွာင္ဖယ္ခ်င္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ (၂) အဲ့ဒီအေၾကာင္းအခုမေျပာခ်င္ေသးဘူး ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လို႕ သူ႕ဘက္ကေျဖရွင္းရမွာကိုမေျဖရွင္းလို႕ သင့္ဘက္က …
“အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ချင်တယ် “
“အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ချင်တယ် “ ချစ်သူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ အချစ်မခံရတဲ့ မိန်းကလေးက အရမ်းကွာတယ် ပြည့်စုံခြင်း မပြည့်စုံခြင်းထက် စိတ်ချမ်းသာမှုမှာ အများကြီး သိသာတယ် အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကျတော့ ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းပျော်နေရတယ် အလိုလိုက်ခံရတယ် ကလေးလေးတစ်ယောက်လို လိုချင်တာ လက်ညိုးလေးထိုးလိုက်ရုံပဲ နှုတ်ခမ်းလေးဆူလိုက်ရုံပဲ..မျက်စောင်းတချက်နဲ့ ချစ်သူဆီကနေ အရာရာ သိမ်းပိုက်နိုင်တယ် ယောင်္ကျားလေးတော်တော်များများက သူတို့ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ဆိုရင် အရာရာပြောင်းလဲသွားကြတယ် သူတို့စိတ်ညစ်မှာ အဆင်မပြေမှာထက် သူ့ချစ်သူကောင်မလေးအတွက်ပဲ အရာရာတွေးပေးတတ်ကြတယ် သူတို့အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန် ဖုန်းလာရင်တောင် ဂိမ်းဆော့နေလို့နော် သဲလေး ဆိုတာလောက်နဲ့ပဲ ပြီးသွားကြတာ ဘော်ဒါတွေရှေ့မှာ ကိုယ့်ကောင်မလေး ကို ဆဲတာဘာညာ မလုပ်ကြဘူး ဘော်ဒါတွေဆဲတာပဲခံမဲ့သူတွေ…. ဒါတင်မကသေးဘူး..ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပက်သတ်တဲ့ …
တကယ်တော့…သဝန်တိုတယ်ဆိုတာချစ်သူတွေနှစ်ယောက်ကြားက အလိုလိုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အရာတွေပါ။တချို့က ကိုယ်သဝန်တိုနေတာကိုသူသိအောင် ဖွင့်ဟမပြောခဲ့ပဲ စိတ်ထဲမှာ မြိုသိပ်ပြီးသိမ်းထားတတ်တဲ့သူတွေလဲရှိကြတယ်။ တချို့က သူသိကိုယ်သိဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကိုယ်သဝန်တိုတတ်တာကို ဖုံးကွယ်မထားနိုင်ပဲ တကယ်ဖွင့်ဟပြောဆိုတတ်တဲ့သူတွေလဲရှိကြပါတယ်။အချစ်တစ်မှာသဝန်တိုမှုမရှိပြန်ရင်လဲ မဖြစ်ပါဘူး သဝန်တိုမှုတွေရှိမှ တကယ်ချစ်နေတာမျိုး ရောက်ပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာသဝန်တိုမှုတွေမရှိခဲ့ကြဘူးဆိုရင် တဂယ်မချစ်ခဲ့ကြလို့ပဲဆိုတာ မင်းလက်ခံနိုင်မှာလား?။ခုလိုမျိုး သဝန်တိုနေရတာဟာ ကိုယ့်ချစ်သူကို မယုံကြည်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘေးက တခြားသူစိမ်းတွေကို စိတ်မချလို့ပါ။ တချို့ပိုစ့်တွေအောက်မှာ( love react ) ပေးနေတာမျိုး( love sticker ) ပေးနေတာမျိုး( love emoji ) ပေးနေတတ်တာမျိုးတို့ စသောအားဖြင့် လိုက်ပြီးသဝန်တိုတတ်တဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။သိပ်ချစ်မိပီဆိုတာနဲ့ ဘယ်အရာမဆို သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသေးအမွှလေးကအစအကုန်လုံးလိုက်ပြီးသဝန်တိုနေတတ်ကြတာတော့ အမှန်ပါ။ တခြားသူနဲ့ရောပြီးရီရီမောမောနေတာမျိုးလဲ မကြိုက်ဘူးကိုယ်ကလွဲပြီး တခြားသူကို ဦးစားပေးမိတာမျိုးကိုလဲ ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်ရာမှာကိုယ့်ကိုမေ့ပြီး တခြားသူနဲ့ပျော်နေမိမှာကိုလဲ စိတ်ကစိုးရိမ်ပြန်တယ်။ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်နဲ့ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကို သဝန်တိုနေတတ်ကြတာဟာ ကိုယ်ကသူ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကို တကယ်ကြောက်နေလို့ပါ။တခြားသူကိုအစားထိုးချစ်ပြီး …
ဆုံးမတတ်သူကို တန်ဖိုးထားပါ လောကမှာ မင်းကိုပြုံးပြတက်သူထက် ဆုံးမတတ်သူက အလွန်နည်းပါးပါ လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတော်တော်များများက အမိုက်ခံပြီး လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးမသွန်သင်ဖို့ ဝန်လေးတတ်ကြတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့လူတစ်ချို့က ဆုံးမသွန်သင်တာကို မကြိုက်ကြဘူးလေ။ လူဆိုတာ အမှားမကင်းသလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူဆိုတာ မရှိပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စေတနာ သန့်သန့်ဖြင့်ထောက်ပြ သွန်သင်တတ်သူက တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ပြုံးပြတယ် ဆိုတာက ရင်ထဲက ပါချင်မှ ပါပါလိမ့်မယ်။ ဆုံးမတာကတော့ သေချာပါတယ် စေတနာအပြည့် ပါနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကို ဆုံးမတတ်သူ တစ်ယောက်ရှိနေတာက သူငယ်ချင်းအယောက် တစ်ရာ ထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေပါသည် ။ Crd Zawgyi ဆုံးမတတ္သူကို …
လောကမှာ “ဝဋ်ကြွေး” ဆိုတာကြီးပါလာရင် ဘယ်လောက်ဘဲ ဘုရား၊တရား လုပ်လုပ် ရှောင်ရှားလို့မရဘူးနော်
လောကမှာ “ဝဋ်ကြွေး” ဆိုတာကြီးပါလာရင် ဘယ်လောက်ဘဲ ဘုရား၊တရား လုပ်လုပ် ရှောင်ရှားလို့မရဘူးနော် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တိုင်း တစ်ခုခု ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့ အကြောင်းက သံသရာတိုအောင်ခွာချနေတာပါတဲ့။ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ရာမှာ( မိမိတစ်နိုင် အကျဉ်းဖြစ်စေ ၊ အကျယ် ဖြစ်စေ ၊ ပဉှာဝါရ ဖြစ်စေ ပဋ္ဌာနပါဠိ ငါးအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပူဇော် ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဇျယ်ခြင်းဟာ) မိမိရဲ့သံသရာ၊ဘဝ အဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့သော သိ၍ ဖြစ်စေ မသိ၍ဖြစ်စေ ပြုခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ် အညစ်အကြေးတွေကို ခွာချနေ ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာ သတိလေးကပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ရှိကြပါတယ် ပဋ္ဌာန်းရွတ်မှ ပူလောင်လာ တယ်၊ ပြဿနာတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဖြစ်ကြတယ်၊ စီးပွားတွေကျကုန်တယ်ဆိုတာ ရံဖန်ရံခါ ရှိတတ်ပါ တယ်။တကယ်လည်းလက်တွေ့ပါ။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက …
အကြွေးကိုဘယ်လောက်ဆပ်ဆပ် မကျေသောသူ၊ငွေအရမ်းလိုနေသောသူတို့အတွက် ယတြ
အကြွေးကိုဘယ်လောက်ဆပ်ဆပ် မကျေသောသူ၊ငွေအရမ်းလိုနေသောသူတို့အတွက် ယတြ ငွေကြေးကိစ္စ အခက်အခဲဖြစ်နေသောအခါ ငွေလိုနေသောအခါ၊အကြွေး ကိစ္စအရေးကြီးနေရ သောအခါ၊ငွေကို လိမ်ခံရသောအခါ ဒီယတြာကို လုပ်ပေးကြခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေကြပါစေ ကြေးလင်ဗန်း ထဲကို ထုံးနှင့် ငါးထောင့်ကြယ်ဆွဲ၊ ဖယောင်းတိုင်ကို (၅)တိုင်စိုက်၊ အလယ်တည့်တည့်မှာ ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ကိုတင် ရေတစ်ဝက်ခန့်ထည့် ကွမ်းရွက်(2)ရွက်ကို ထည့်မယ်၊ကွမ်းရွက်ထည့်ရင် အရိုးကို အောက်က ထားကြပါ၊ ပြီးလျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ကပ်ပြီး ငွေကြေးပြဿနာ အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားအောင် ဆုတောင်းပါ။ ဘယ်နေ့နံ မဆိုလုပ်ရမယ့်နေ့ က “တနင်္လာ “နေ့ဖြစ်တယ် အချိန် ၉နာရီ ၄၅ မိနစ် တိတိ မှာ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ ရွတ်ဆိုရန် ဂါထာမှာ “ဒိဝါတပ္ပတိ ” …
မြေပြင်မှာပဲရောင်းရောင်း အွန်လိုင်းမှာပဲရောင်းရောင်း စျေးရောင်းကောင်းစေမဲ့ယတြာ တနငျ်ဂနှနေ့ မနကျ ၇း၃၀ မှ ၉းဝဝ အတှငျး တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲ ၁း၃၀ မွ ၃းဝဝ အတွင်း အငျ်ဂါနေ့ မနကျ ၉းဝဝ မှ ၁၀း၃၀ အတှငျး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတွင်း ကွာသပတေးနေ့ မနကျ ၁၀း၃၀ မှ ၁၂းဝဝ အတှငျး သောကွာနေ့ မနကျ ၆းဝဝ မွ ၇း၃၀ အတှငျး စနေနေ့ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ မှ ၁း၃၀ အတွင်း အထက်ပါ နေ့ရက်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် …
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးည နေ့လယ်ခင်းထိ အိပ်ရာထဲက ထွက်မလာနိုင်တဲ့ ကြင်စဦးလင်မယားရဲ့အဖြစ်
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးည နေ့လယ်ခင်းထိ အိပ်ရာထဲက ထွက်မလာနိုင်တဲ့ ကြင်စဦးလင်မယားရဲ့အဖြစ် ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မျေခာဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘဝေရာက်ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်အတာ်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား…” “မထကြသေးဘူး…” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့…” “ကိုယ့်ဖာသာ စားမှာကိုမြန်မြန်စားစမ်းပါဟာ…။ တော်ကြာကျောင်းနောက်ကျနေအုန်းမယ်…” ဒီလိုနဲ့ မောင်ရွှေအေးလဲ မနက်စာစားပြီး ကျောင်းထွက်သွားပါတယ်…။ မုန့်စားကျောင်းဆင်းတော့ ကျောင်းနဲ့အိမ်က နီးနေတဲ့အတွက် မောင်ရွှေအေးက အိမ်ပြန်လာပြီး ထမင်းစားလေ့ ရှိပါတယ်…။ ထမင်းစားနေရင်း ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ အမေကို… …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 292 Next